January 8, 2021 - Online Hartha
သားကို ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် ရောင်းပေးလို့ရလားခင်ဗျ သား ပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါတဲ့
January 8, 2021 by Online Hartha
ကျောင်းနှင့် အလှမ်းမဝေးလှတဲ့ ထမင်းဆိုင်သေးသေးလေးတစ်ဆိုင်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်က ထမင်းလာမှာစားတယ် ဆိုင်ရှင်နားကပ်ပြီး လေသံတိုးတိုးလေးနှင့် ဟိုလေသားကို ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက် ရောင်းပေးလို့ရလားခင်ဗျ သားပိုက်ဆံမလောက်လို့ပါ”ရပါတယ်သားရယ်ပြောပြောဆိုဆိုနှင့် ဆိုင်ရှင်အဒေါ် ကြီးကယောက်ျားရေ ထမင်းအလွတ်တစ်ပွဲလောက်လုပ်ပေးပါဦးအော်ဟင်းချိုနဲ့ ငါးပိရည်လည်း ထည့်ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော် ယောက်ျားဖြစ်သူက ထမင်းအဖြူတစ်ပွဲကိုကောင်လေးထိုင်နေတဲ့ ခုံမှာသွားချပေးလိုက်တယ် ကောင်လေးက သူ့ကိုထပ်မှာတယ်ဟိုလေသားအတွက်နောက်ထပ် ဟင်းမပါတဲ့ ထမင်းဗလာတစ်ထုတ်ထပ်လုပ်ပေးလို့ ရလားခင်ဗျ ကောင်းလေးခမျာ ပြောသာပြောနေရတယ် သူ့မျက်နှာက အတော်လေး အားနာနေတဲ့ပုံပါ…ရပါတယ်သားရယ် ဒါနဲ့ ဒီထမင်းထုတ်က မင်းဘာသွားလုပ်ဖို့လည်း * သား ညနေကြရင် စားဖို့ပါဦးဆိုင်ရှင်အဖိုးကြီးက သူ့ကိုဂရုနာသက်တဲ့ မျက်လုံးနှင့်ကြည့်ပြီးအင်း!ကောင်လေးကြည့်ရတာမြို့မှာသာကျောင်းလာတက်တယ် အိမ်ကမိဘတွေကငွေကြေးအခက်ခဲ ရှိပုံရတယ်! အမှန်တကယ်တော့ သူတို့လင်မယားကလည်းတစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားပါ ဒီဆိုင်နေရာလေးကိုသူများငှားပေးလို့သာ ကံကောင်းပြီးဈေးရောင်းရတဲ့ဘဝပါ မရှိသူမို့လည်း မရှိသူကိုစာနာတတ်တဲ့စိတ်က သူတို့လင်မယားမှာ ရှိပြီးသားပါလေ ဟင်းအိုးမှ ဟင်းတွေကိုခတ်ပြီး ထမင်းများနဲ့ သူဖုံးဖိပြီးထည့်နေမိသည် ဒါကို မိန်းမဖြစ်သူကမြင်တော့ … Read more
အိမျမှာ ကွှကျတှေ ပေါနရေငျ ဒါလေးလုပျကွညျ့ပါ
ကြွက်ပြေးသော နည်းလေး ကြွက်တွေက ပေါလိုက်တာ့ ပေါတာမှ စာအုပ်တွေကိုက် အဝတ်တွေကိုက် ညကျတော့ တစ်ဝုန်းဝုန်းနှင့်လိုက်တမ်းပြေးတမ်းကစားကြ ၊ကျိန်းမရအောင်ဖြစ့် တစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်လှမ်းအော်ကြ တစ်ခါတလေများဆို ပြေးရင်းလွှားရင်းခြင်ထောင်အမိုးပေါ်ဒိုင်ဘင်ထိုးချ လွန်တာမှအတော်လွန့်အဲ့ဒါနှင့်ကလေးတွေက ထောင်ချောက်ထောင်မယ်လျှောက်တယ့် မလုပ်နှင့် ဆေးကျွေးမယ်ဆိုတယ့်လုံးဝမလုပ်နှင့်ပေါ့…. အဲ့ဒါနှင့်တစ်နေ့ကျတော လက်မောင်းအောင့်လို့လင်ဇီးဒါဏ်ကြေဆေးလိမ်းတယ့် ပူလိုက်တာ့.. အခိုးကလည်း မွှန်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ့် လူတောင်အနံ့ခိုးရတာနှင့်မျက်ရည်ကျရတယ် ဟိုအကောင်တွေ(ကြွက်)ဆိုဘယ်လိုနေမလဲမသိ သူတို့နှာခေါင်းကရှေ့ရောက်နေတာဆိုတော့ ပိုပြီးအနံ့ရမှာပဲဆိုပြီးစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့ ဆိုတော့ကျောင်းသားသုံးယောက်ခေါ် ကြွက်လာလမ်း လျှောက်လမ်းတွေ လင်ဇီးတွေ ထူထူသုတ်ပြီးအသာနေလိုက်တာ့ ည(၁၀)နာရီလောက်ကျတော့ သောင်းကျန်းဖို့လာနေကြအချိန်အတိုင်း ကြွက်တစ်အုပ်ရောက်လာပါရော့ ရှေ့ဆုံးကအကောင်က သုတ်ထားတဲ့လင်းဇီးနှင့်နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့ပြီးကြမ်းပြင်ပေါ်ပြုတ်ကျ့… သူ့ပါးစပ်ကအော်ချင်တာအော်ပြီး ထွက်ပြေးအဲ့ဒီလိုနှင့်နှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်ဖြစ်ရော. . နောက်ကကြွက်တစ်အုပ်ရှေ့ဆက်မတက်ပဲ အသိုက်ပါပြောင်းတယ်ထင်ပါရဲ့… ခုဆိုကြွက်တွေလာမသောင်းကျန်းတာသုံးရက်ရှိပြီ…..ကျေးဇူးပါလင်ဇီးရေ့ သူ့အသက်မသေပဲ စိတ်ချမ်းသာစွာအိပ်စက်နိုက်တာ.. #ခရစ်ဒစ် Unicode Version ကွှကျပွေးသော နညျးလေး ကွှကျတှကေ ပေါလိုကျတာ့ ပေါတာမှ စာအုပျတှကေိုကျ အဝတျတှကေိုကျ ညကတြော့ … Read more
လူအများစု မစားဖြစ်ပဲ ထွေးထုတ် နေမိတဲ့ စပျစ်သီးအစေ့လေးတွေအကြောင်း စပျစ်သီး အစေ့ရဲ့ အရသာက ခါးသက်သက် စားရတာကလည်း မာဆတ်ဆတ်နဲ့ဆိုတော့ စပျစ်သီးစားတိုင်း ထွေးထုတ်ပစ်လိုက်တာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေမသိတဲ့အချက်တစ်ခုက စပျစ်သီးက သူရဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေ အကုန်လုံးကို အစေ့ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားတာပါ။ စပျစ်သီးအစေ့ထဲမှာပါတဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေကိုသာ သိခဲ့မယ်ဆိုရင် အရင်က ထွေးထုတ်ခဲ့မိတဲ့ စပျစ်သီးစေ့လေးတွေကို နှမြောမိမှာ သေချာပါရဲ့။ နိုင်ငံတကာမှာလည်း စပျစ်သီးအစေ့ရဲ့ အဆီအနှစ်ကို ထုတ်ယူပြီး ဆေးဝါးအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချ နေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ စပျစ်သီးအစေ့ထဲမှာ အရမ်းကို အစွမ်းထက်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် လည်း တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းရဲ့ အစွမ်းကြောင့် အရွယ်တင်နုပျိုစေပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်လှပစေပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပျက်စီးသွားတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေအထိ … Read more
အသီးကိုသာ ကြိုက်လို့စားနေတာ အရွက်က အဲ့လောက်တန်ဖိုးရှိမှန်းမသိဘူး
နာနတ်ရွက်​ တစ်ရွက်က ဒီ​လောက်​ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်း ခုမှသိ​တော့တယ်​….မိတ်​​ဆွေတို့လည်း ဖတ်​ကြည့်​လိုက်​​နော် နာနတ်ပင်ဟာဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ နာနတ်သီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုနေကြတဲ့ သတင်းများ လည်းရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင်တဲ့ နာနတ်သီးကနာနတ်ရွက်လေးတစ်ရွက်နဲ့တင် လူအများ အတွက် ဆေးအသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါ တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုသူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်- (၁) နာနတ်ရွက်(၁)ရွက်ကို ထုထောင်းပြီးညှစ်ရည်(သတ္တုရည်) ဟင်းခပ်ဇွန်း(၁)ဇွန်းကို သကြားထည့်ပြီး သောက်ပေးပါက ကြို့ထိုးခြင်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ (၂) ဒါတင်မကပါဘူး။ အမျိုးသမီးများ မီးယပ် သွေးချုပ်ခြင်း၊မီးယပ်ငုတ်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးကာ မီးယပ်သွေးကိုမှန်ကန်စေပါတယ်။ (၃) ကလေးတွေအတွက် အရွက်ညှစ်ရည်ကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း(၂)ဇွန်းလောက်တိုက်ပေးပါက ဝမ်းတွင်းကသန်ကောင်တွေကို သေစေပါတယ်။ (၄) အလှအပကျန်းမာရေးအတွက် လူအတော်များများ စိတ်ညစ်ကြရတဲ့ ဥိးခေါင်းကသန်း၊ဗောက်၊အနာအဆာ များကို ခေါင်းလျော်ရည်ထဲနာနတ်ရွက်ထုချေရောစပ်ပြီး လျှော်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ စမ်းသပ်ပြီးလည်း လျှော်ဖူးပါတယ်။ ဒါပြင်ဆံပင်ကိုလည်းပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ … Read more
သနပျခါးကွိုကျတဲ့ မိနျးကလေးတှေ သိထားရအောငျပါ
မေမေ ပြောပြတဲ့ ပျိုမေ တို့အကြိုက် သနပ်ခါး ကျောက်ပျဉ် သနပ်ခါး ကျောက်ပြင် အသစ်ဆိုရေလေးဆေးလိုက်ပြီးသနပ်ခါး တုံးသွေးထည့်လိုက်တာပဲအဲသလိုလုပ်လို့မရပါဘူး ကျောက်သား အစစ်ကိုထွင်းထားတဲ့ ကျောက်ပျဉ် ဖြစ်ဖြစ် ဘိလပ်မြေ လိုမျိုးကိုပုံပြု့ထားတဲ့ကျောက်ပျဉ်ဖြစ်ဖြစ်ပထမဦးဆုံးအသုံးမပြု့ခင်မှာဝယ်လာတဲ့ကျောက်ပျဉ် ကိုရေစင်စင်ဆေးပြီး ကျောက်ပျဉ် ကိုရေပုန်းထဲကိုထည့်ပြီးရေနဲ့တစ်ညစိမ်ထားပါနောက်တစ်ရက်မှာနနွန်းတက်နဲ့ဆီ+ဆားနဲ့ကိုသွေးပြီးတစ်နေကုန်နေလှမ်းထားရပါတယ်။ ဆီခြောက်တော့မှသနပ်ခါးကျောက်ပျဉ်ကိုရေထပ်ဆေးပြီးမှမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သနပ်ခါးတုံး ကိုသွေးရပါတယ် ထွက်လာတဲ့ သနပ်ခါး ကလေးတွေကညက်နေပြီးတနေကုန်ပါးပြင်ပေါ်အရာထင်နေပါတယ်တဲ့ကဲ ကျောက်ပျဉ်အ သစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြု့ရသလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့ မေမေပြောပြတယ် ကျောက်ပျဉ် ပေါ်သနပ်ခါး သွေးတာ လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုလုပ်တာနဲ့တူတူပဲတဲ့ ဒါပေမဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်ချသွေးရတာမဟုတ်ပဲမိမိခါးအလည်လောက်အမြင့်ရှိတဲ့နေရာမှာထားပြီးသွေးရမယ်တဲ့ သနပ်ခါး ကိုအားစိုက်သွေးနေရတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ်လို့မထင်ရပေမယ့် နှစ်နဲ့ချီပြီးနေ့စဉ်သွေးနေရတော့လက်မောင်းကြွက်သွားတွေကပိုပြီးသန်မာတယ် ပျော့ပြီးရွဲကျခြင်းမျိုးမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘယ်ညာတော့လှည့်သွေးပေါ့တဲ့ ငရုပ်သီးထောင်း တာလဲအတူတူပဲတဲ့ခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ရေအိုး ရွက်တာပါတဲ့ မေမေ အမေ(အဖွား)ပြောပြတာလို့ပြောတယ်။ မိုးမခ Unicode Version မမေေ ပွောပွတဲ့ ပြိုမေ တို့အကွိုကျ သနပျခါး ကြောကျပဉျြ သနပျခါး ကြောကျပွငျ … Read more
အုတ်စီလျှင် ခန့်မှန်းကုန်ကျမည့်စာရင်း လေးလက်မခွဲ ဆယ်ပေပတ်လည် အုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ စတုရန်းပေ အုတ် ၄၀၀ လုံး ဘိလပ်မြေ ၃ အိတ် မြစ်သဲ ၁၀ ကုဗပေ ၉ လက်မအုတ်စီခြင်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ စတုရန်းပေ နှုန်း အုတ် ၇၅၀ လုံး ဘိလပ်မြေ ၅.၅ အိတ် မြစ်သဲ ၁၀ ကုဗပေ ၁: ၂ :၄ ကွန်ကရစ် တစ်ကျင်နှုန်း ဘိလပ်မြေ ၁၉ အိတ် မြစ်သဲ ၄၉ ကုဗပေ မြစ်ကျောက်စရစ် ၉၂ ကုဗပေ ၁:၃:၆ ကွန်ကရစ် တစ်ကျင်နှုန်း ဘိလပ်မြေ ၁၃ အိတ် မြစ်သဲ ၄၆ ကုဗပေ မြစ်သဲကျောက်စရစ် ၉၆ … Read more
သတိကွီးကွီးထားပွီးပြျောရှငျကွပါ အပြျောကနေ အပကျြဖွဈတတျပါတယျ (ရုပျသံ)
လွတ်လပ်ရေးနေ့ကလို့ သိရပါတယ် ကျိုးရင်ကျိုး မကျိုးရင် အသေပဲ ရုပ်သံဖိုင် အောက်ဆုံးမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်…. သတိကြီးကြီးထားပြီး ပျော်ရွှင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ မြန်မာတို့ရဲ့ဓလေ့အရ အလှူပွဲနဲ့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာ ချောတိုင်တက်အစားနည်းကို အပျော်ထည့်သွင်းတတ်ကြပါတယ် ဒါဟာအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ အားကစားနည်းပါ ခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်လို့ပြုတ်ကျခဲ့ရင် ပျော်ပွဲကနေ ပွဲပါပျက်နိုင်ပါတယ် မကစားရဘူးလို့မဆိုလိုပါ ကစားရင်လဲ အောက်မှာမြေကြီးပေါ်ကို ကောက်ရိုးတို့ဘာတို့ခင်းကျင်းစီစဉ် Save ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ် အခုလိုပြုတ်ကျခဲ့ရင်တောင် သေတာကျိုးတာ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းပါးတာပေါ့ အခု ဗီဒီယိုမှာ ပြုတ်ကျသွားတဲ့ အမျိုးသား ဘာဆက်ဖြစ်မှန်းမသိပေမယ့် မသေရုံတမယ်လေး ခံလိုက်ရတာပါ သတိထားပျော်ရွှင်ကြဖို့တိုက်တွန်းရင်း…. မေတ္တာဖြင့် #လူတင် Video #ခရက်ဒစ် Unicode Version လှတျလပျရေးနကေ့လို့ သိရပါတယျ ကြိုးရငျကြိုး မကြိုးရငျ အသပေဲ သတိကွီးကွီးထားပွီး ပြျောရှငျကွဖို့တိုကျတှနျးလိုကျပါရစေ မွနျမာတို့ရဲ့ဓလအေ့ရ အလှူပှဲနဲ့ ပြျောပှဲရှငျပှဲတှမှော ခြောတိုငျတကျအစားနညျးကို အပြျောထညျ့သှငျးတတျကွပါတယျ … Read more
သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖားအောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက်
သက်သတ်လွတ်ဆိုတာ တစ်ချိန်တုန်းက ဘုန်းကြီး အစင်တောထဲနေစဉ်အခါက ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက ” သက်သတ်လွတ်ဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိလဲ “တဲ့ သူကလာမေးတယ်။ မေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ သူဘာဦးတည်ချက်နဲ့ မေးနေတာ ဘုန်းကြီးလည်း နည်းနည်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးက ” ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး ” လို့လဲပြန်ဖြေလိုက်တော့ သူကဈေးဆစ်တတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေတော့ ” ဘာဖြစ်လို့လဲ”တဲ့ သူကထပ်မေးပါတယ်။ဒီတော့ဘုန်းကြီးက မလွဲမရှောင်သာတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ သူ့ကိုရှင်းပြပါတယ်။ အသားငါးကို မစားဘူးလို့ ပြောရင် အဓိပ္ပါယ်ရှိတန်သလောက် ရှိပါတယ်။သို့သော်လည်း သက်သတ်လွတ်စားနေပါတယ်ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပါယ်နဲနဲကင်းမဲ့တဲ့ သဘောရှိတယ်လို့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခုလိုပေါ့ ယင်နားစာတွေကို စားလိုက်ရင် သက်သတ်လွတ်တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတော့မလား။မပြောနိုင်ဘူး။ ဘုန်းကြီးတို့ ဆွမ်းခံတဲ့ အခါ ယင်တွေကမည်းနေတာဘဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီယင်တွေက ဘယ်ကလာလဲ ဟိုဘက်က အိမ်သာစတဲ့ မကောင်းတဲ့နေရာတွေက လာရှိလေတော့ သူတို့စီမှာ မမြင်နိုင်တဲ့ … Read more
အရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီး (၃)ရက် အိပ်ပျော်သွားသူရဲ့ ပြန်နိုးလာချိန်မှ သိလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဆိုး
အရက်သောက်ရာမှ (၃)ရက် အိပ်ပျော်သွားသူ ရဲ့ ပြန်နိုးလာချိန် မှာ သိလိုက်ရ တဲ့ အဖြစ်ဆိုး ဦး ဇော်မင်းဦး အသက်(၄၇) (ဘ)ဦးလှမြင့်(မိ)​ဒေါ်ရင်နုဘုရားကြီးကုန်း​ကျေးရွာ၊ ပုသိမ်အ​ရှေ့မြို့နယ် ဧရာဝတီတိုင်း… ဖျာပုံမှာ အရက်သောက်ရာမှ (၃)ရက်ခန့် အိပ်​ပျော်သွားပြီပြန်နိုးလာတော့ ကျိုက်ခမီမှ ဘုံ​ကျောင်း(ငါးဖမ်း​လှေ)​ပေါ်​ရောက်​နေ​ကြောင်းသိရ…။ လာရောက်ပို့ဆောင်သူ ပွဲစားမခိုင်မှ​ငွေ (၇)သိန်း ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး လှေပေါ်တွင် (၆)လ(၁၅)ရက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါသည်..။ လှေနားသဖြင့်​ နေရပ်ပြန်ရန် လမ်းစာရိတ်တောင်းသော်လည်း ပွဲစားကြိုယူ​ငွေ (၁)သိန်းကျော် မကျေသေးသဖြင့်​ လမ်းစာရိတ်မရရှိခဲ့ပါ..။ ကျိုက်ခမီမှ​မော်လမြိုင်သို့ လမ်းလျှောက်ခဲ့..။ထမင်းမစားရ​သေးသဖြင့်​မော်လမြိုင် RESCUE လူမူကယ်ဆယ်​ရေးအဖွဲ့မှ ထမင်းကျွေး၊ အဝတ်အစားပေး၍ နေရပ်ပြန်နိင်​ရေးအတွက်စီစဉ်​ပေးသွားပါမည်…။ မော်လမြိုင် RESCUE လူမူကယ်ဆယ်​ရေးအဖွဲ့ ၊09 785 785 199၊ 09 260 144 199၊ 057 2021640 … Read more